Motorola One Hyper waxaa la soo bandhigi doonaa Diseembar 3 | Androidsis
Heerka Motorola One wuxuu ku koray xawaare wanaagsan sanadkan, iyadoo dhowr moodel la sii daayay illaa iyo hadda. Ugu dambeeyay wuxuu ahaa One Macro, taas oo bil kahor timid Spain. Bil ka hor warar xan ah ayaa sidoo kale bilaabmay oo ku saabsan jiritaanka taleefan soo socda oo noocan ah, kaas oo loogu yeeri doono Motorola One Hyper. Waxay umuuqataa inay dhowdahay.
Ilaa hadda, kaliya magaca Motorola One Hyper ayaa la xaqiijiyay, laakiin ma jirin wax faahfaahin ah. Waxaa jira faahfaahin cusub oo hadda ku saabsan taleefankan, marka lagu daro warar xan ah oo sheegaya in si rasmi ah loo soo bandhigi karo bisha Diseembar. Inkastoo tan aan la xaqiijin.
Sida laga soo xigtay xogta cusub, Motorola One Hyper ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Diseembar 3 si rasmi ah. Sida caadada u ah astaanta, soo bandhigisteeda ayaa ka dhici doonta Brazil, oo ka mid ah suuqyadeeda ugu waaweyn. Telefoonkani wuxuu la imaan lahaa kamarad telescopic ah, maxaa yeelay diiradda noocyadan ayaa ah sawir qaadista.
Heer farsamo, sida inta kale ee noocan ah, waxay noqon laheyd telefoon dhexdhexaad ah. Waxaan u isticmaali lahaa Snapdragn 675 inuu yahay processor, oo leh RAM 4 GB ah iyo 128 GB oo keyd ah. Intii aan isticmaali lahaa kamarad gadaal laba jibaaran, oo leh 64 MP aaladda ugu weyn iyo 8 MP mid labaad, halka kaamirada hore ay noqoneyso 32 MP.
Astaantu waxay ku guuleysatay inay naga tagto taleefannada xiisaha leh ee qaybtan, iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshahan. Marka waxaa xiiso leh in la arko waxa Motorola One Hyper ay tahay inay na siiso, gaar ahaan si aad u aragto kamaradiisa telescopic. Marka lagu daro inuu yahay kii ugu horreeyay ee sumadda ee adeegsada dareeraha 64 MP oo ah dareemaha ugu weyn.
Haddii taariikhdani run tahay, markaa shan maalmood oo keliya ayaa nala kala saarayaa inaad wax walba ka ogaato Motorola One Hyper. Maaddaama waxbadan laga ogaanayo taleefanka ama dhacdadaada bandhigga, waan kula wadaagi doonnaa macluumaadkaas. Maxaad ka fileysaa shirkadan cusub ee moobaylka ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola One Hyper ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Diseembar
Twitter ayaa tirtiri doonta xisaabaadka aan shaqeynin in ka badan 6 bilood